ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းမှအလုပ်အကိုင်သတင်းအချက်အလက် [Genvers] အလုပ်ခွင်တွင်း ၀ င်ရန်အလုပ်
"ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း" အပါအ ၀ င်တစ်နိုင်ငံလုံးရှိနေရာများတွင်အလုပ်နေရာများစာရင်း
(1-22) / 22
TRY HOUSE Co. , Ltd.
ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းအပါအ ၀ င်
● "TRY HOUSE Co. , Ltd. " သည်ငယ်ရွယ်သောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီးအသက် ၂၀ နှင့် ၃၀ ကြားရှိအလုပ်သမားအားလုံးပါ ၀ င်သည်။လစာစနစ်သည်အသက်ကြီးမှုအပေါ်တွင်အခြေခံသည်မဟုတ်ပါ၊ ထို့ကြောင့်သင်၏အကောင်းဆုံးကိုလုပ်ဆောင်လျှင်သင်၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုပမာဏသည်သင်၏လစာတွင်ထင်ဟပ်လိမ့်မည်။
အလုပ်အ ၀ တ်အထည်များငှားရမ်းခြင်း
အငယ်တန်းအထက်တန်းကျောင်းဘွဲ့ရ OK ကို
အလုပ်သင် / အတွေ့အကြုံမရှိသောကြိုဆိုသည်
●နေ့စဉ်ခံစားခွင့်စနစ်ယန်း ၁၀၀၀၀ မှ ၂၅၀၀၀ ယန်း * အတွေ့အကြုံနှင့်စွမ်းရည်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်
Koshigaya City, Saitama စီရင်စု
● Koshigaya City, Saitama စီရင်စု
TRY HOUSE Co. , Ltd.အလုပ်များကြည့်ပါ
[မြေတိုင်းစစ်ဆေးသူ / Sumitomo လက်မှုပညာရှင် (အတွေ့အကြုံရှိသူ) အရေးပေါ်လူသစ်စုဆောင်းမှု! ] ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာကိုအသုံးချပြီးစွမ်းဆောင်ရည်များစွာရှိသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်များစွာတွင်ရှိသောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ဒီနေရာတွင်သင်၏စွမ်းရည်နှင့်အတွေ့အကြုံများကိုတိုးမြှင့်နိုင်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုပါရှိသည်။
Our ကျွန်ုပ်တို့၏ဝိသေသလက္ခဏာမှာများစွာသောဆိုဒ်များသာမကစီးပွားရေးအကျပ်အတည်းများစွာပါ ၀ င်သည်။အထွေထွေစူးစမ်းလေ့လာခြင်းနှင့်ဗိသုကာဆိုင်ရာလေ့လာခြင်းများအပြင် CAD မူကြမ်းနှင့်အမှတ်တံဆိပ်အချက်အလက်များအပြောင်းအလဲများလည်းရှိသည်။ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွင်သင်သည်ဗိသုကာဆိုင်ရာဗဟုသုတများစွာကိုရယူနိုင်သည်။ အထွေထွေလေ့လာရေးကုမ္ပဏီများမလုပ်ဆောင်နိုင်သောအတွေ့အကြုံအမျိုးမျိုးရှိသည်။ "သင်ကဗဟုသုတနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုအမျိုးမျိုးကိုရရှိလိမ့်မည်။ သင်သည်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုတက်ကြွသောအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်နိုင်သည်။ ] ... ဒီလိုကြီးထွားမှုနှင့်ဆုချခြင်းကိုတွေ့ကြုံခံစားပါ။
▼မြေတိုင်းစစ်ဆေးသူ / ဗိသုကာဆိုင်ရာစစ်ဆေးသူ / Sumitomo လက်မှုပညာသည်
▼လစဉ်လစာ ၂၅၀,၀၀၀ - ၃၅၀,၀၀၀ ယန်းသို့မဟုတ်ထိုထက်မက * အတွေ့အကြုံနှင့်စွမ်းရည်ကိုစဉ်းစားသုံးသပ်ပါမည်။ မင်းရဲ့ကြိုးပမ်းမှုအရမင်းလစာကိုဘယ်အချိန်မဆိုမြှင့်မယ်။ ――――――――――――――― [လေ့လာရေးလုပ်ငန်း] * ...
ယိုကိုဟားမား - မြို့ kanagawa စီရင်စု
▼တိုကျို၊ Saitama၊ Chiba နှင့်အခြားမြို့ပြareasရိယာများသည် Kanagawa စီရင်စု၊ Yokohama City ကိုဗဟိုပြုသည်။ * အလုပ်နေရာသည် Chojamachi, Naka-ku, Yokohama ရှိဌာနခွဲရုံးဖြစ်လိမ့်မည်။
Shinken Co. , Ltd.
[အလေးအနက်ထားကစားနှင့်အလုပ်လုပ်! ] Shinken သည်အလုပ်ကိုအလေးအနက်ထားပြီးအလေးအနက်ထားသောမျှတသောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကိုအလေးအနက်ထားရန်နှင့်တာ ၀ န်ယူမည်ဟုကတိပေးသည်။ကျင့်ဝတ်နှင့်အမူအကျင့်များကိုကျွန်ုပ်တို့တန်ဖိုးထားသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ထမ်းများကိုလည်းဤနည်းဖြင့်ပညာပေးသည်။ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းလောကဟာ ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဆောက်လုပ်ရေးကိုကောင်းမွန်စွာပြုလုပ်ပြီးကြောင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အသေးစိတ် ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းကိုတန်ဖိုးထားပါသည်။သင်အဆင်ပြေစွာအလုပ်လုပ်နိုင်သောပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ကုသမှုကိုကျေပွန်ခြင်းနှင့်အလုပ်ခွင်၏လေထု။
Daily ② [နေ့စဉ်လစာ] ယန်း ၉၀၀၀ မှ ၁၅၀၀၀ ယန်း [လစဉ်လစာ] ယန်း ၂၀၀,၀၀၀ မှ ၄၀၀၀၀၀ ယန်း phone ကျေးဇူးပြု၍ ဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်ပါ။
Ishioka City, Ibaraki စီရင်စု
ရုံး - ၁၉၅၁-၁၁ Kamiso၊ Ishioka City, Ibaraki စီရင်စုတောင်ပိုင်း၊ Ibaraki စီရင်စု (Tsuchiura, Ishioka, Ami, Tsukuba စသည်)
Shinken Co. , Ltd.အလုပ်များကြည့်ပါ
Cogrove Co. , Ltd.
[Dismantling / Tobi / Heavy Equipment Operator] ကျွန်တော်တို့ဟာအနှောင့်အယှက်မရှိအလုပ်နဲ့အလုပ်များနေတဲ့အတွက်ချက်ချင်းစုဆောင်းနေပါတယ်။အကယ်၍ သင်သည်သင်၏အကောင်းဆုံးကိုအလေးအနက်ထားပါက၎င်းသည်သင်၏လစာတွင်ထင်ဟပ်ပြီးပြန်လာလိမ့်မည်။ထို့အပြင်၎င်းသည်“ ထူးခြား။ ရက်ရက်ရောရောလူမှုဖူလုံရေးအစီအစဉ်” (^^) ဖြင့်ဝါကြွားသောအလုပ်လွယ်သည့်အလုပ်ခွင်ဖြစ်သည်။
●အမြဲတမ်းအလွန်အလုပ်များသောကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီတွင်အလုပ်အမြောက်အများကြောင့်ပိုမိုမြန်ဆန်။ ယုံကြည်စိတ်ချရသောတိုးတက်မှုရှိသောကြောင့်အလုပ်တွင်အားလပ်ချိန်များမရှိခြင်းကြောင့်တည်ငြိမ်ပြီးဝင်ငွေမြင့်မားခြင်း [XNUMX] ၏ထူးခြားသောအားသာချက်ရှိသည်။သင်တက်ရန်ရည်မှန်းထားသောအတွေ့အကြုံရှိသူတစ် ဦး လားသို့မဟုတ်လက်သမားဖြစ်ရန် ရည်ရွယ်၍ အတွေ့အကြုံမရှိသောသူဖြစ်ပါစေ၎င်းသည်အလုပ်လုပ်ရလွယ်ကူပြီးအလုပ်ရကျိုးနပ်ပါသည်။ ●မိသားစုစရိတ်နှင့်လူမှုဖူလုံရေးစသည့်ထောက်ပံ့ကြေးများကိုရနိုင်သည်။ထို့အပြင်မည်သည့်နေရာတွင်မျှမရရှိနိုင်သည့်ရက်ရောသောလူမှုဖူလုံရေးအစီအစဉ်ဖြင့်စိတ်ငြိမ်သက်မှုဖြင့်သင်အလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ ●အချိန်ပိုနီးပါးမရှိတော့ပါ၊ သင်အချိန်ကိုယူနိုင်သဖြင့်၊ အချိန်သီးသန့် ထား၍ ဖွင့် / ပိတ်နိုင်သည်။
●ဖြိုဖျက်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ Tobi အလုပ်၊ မိုးသည်းထန်စွာသောစက်ကိရိယာအော်ပရေတာ၊ အမှိုက်ပုံ (3t / 4t)
●နေ့စဉ်သို့မဟုတ်လစဉ်လစာ [နေ့စဉ်] ၁၃,၀၀၀ မှ ၁၉,၀၀၀ ယန်း [လ] ၂၃၀,၀၀၀ မှ ၄၅၀,၀၀၀ ယန်း * အတွေ့အကြုံနှင့်စွမ်းရည်ကိုစဉ်းစားသုံးသပ်ပါမည်။ သင်၏ငွေပေးချေမှုပေါ် မူတည်၍ ငွေပေးချေမှုမည်သည့်အချိန်တွင်မဆို ...
●တိုကျိုရှိအဓိကနေရာများ၊ အဓိကအားဖြင့် Arakawa ရပ်ကွက်၊ တိုကျိုနှင့် Santoama, Chiba နှင့် Kanagawa စီရင်စုများကဲ့သို့ Kanto inရိယာများ။ * ကားနှင့်မော်တော်ဆိုင်ကယ်စီးရန်အဆင်ပြေပါသည်။ * ဆိုက်ပေါ်တွင် မူတည်၍ တိုက်ရိုက်ပြန်ပို့နိုင်သည် * စိုင်း ...
Cogrove Co. , Ltd.အလုပ်များကြည့်ပါ
Ishige Formwork Co. , Ltd.
ပုံသဏ္workာန်လက်သမား★အသက် ၁၃၀၀၀ မှ ၂၀၀၀၀ ယန်း 1.3 လစာ ၂၄၀-၄၀၀၀၀၀ ယန်းအထက်★နေ့စဉ် / အပတ်ပေးငွေ OK (စည်းမျဉ်းများအတွင်း) ★အားလပ်ရက်များ / အပတ်စဉ် ၂ ရက်အပြည့် - ★ကျန်ရှိနေသည်မဟုတ်။ ★အဆောင် / ကုမ္ပဏီ၏အိမ်ရာ (အိမ်သုံးပစ္စည်းများ) ★သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုန်ကျစရိတ် < <ပမာဏအပြည့်အဝ >> ပေးဆောင်★★အလုပ်နှင့်ပုဂ္ဂလိကကျေနပ်မှုရှိပါတယ်
Uraga ရှိပင်လယ်နားတွင် Yokosuka တည်ရှိသည်။၎င်းသည်အဓိကအထွေထွေကန်ထရိုက်တာ၏ကြီးမားသောလုပ်ငန်းခွင်စီမံကိန်းဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်တည်ငြိမ်သောအလုပ်ပမာဏနှင့်အတူပြီးပြည့်စုံသောအလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်သည်။ ★☆★《 Live-in》 ★☆★အဆောင်သည်အပြည့်အဝတပ်ဆင်ထားသည် (ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အိမ်အသုံးအဆောင်)၊ ထို့ကြောင့်သင်လိုအပ်သည်မှာအလုပ်အဝတ်နှင့်ဖိနပ်ဖြစ်သည်။မင်းခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုတည်းလိုတယ်။ ★☆★《 သွားခြင်း OK မှာလည်းအဆင်ပြေပါသည်★★★သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုန်ကျစရိတ်အားလုံး All ငွေပေးချေမှု》!ကောင်းမွန်သောလုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေကြောင့်အားလပ်ရက်များသည်တစ်ပတ်လျှင်နှစ်ရက်၊ အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များဖြစ်သည်။အချိန်ပိုနီးပါးမရှိတော့ပါ၊ သင်၏အလုပ်နှင့်ကိုယ်ပိုင်ဘဝကိုခံစားနိုင်သည်။ ★☆★ more ၀ င်ငွေပိုလိုချင်သူများ》 ★☆★အားလပ်ရက်များသို့ခရီးသွားခြင်းသည်လည်း OK ဖြစ်သည်။ငါတို့သည်သင်တို့၏ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းပါလိမ့်မယ်။
[ကုမ္ပဏီ] [က] အတွေ့အကြုံရှိသူ ဦး စားပေးကုသမှု၊ အတွေ့အကြုံမရှိသူ (အလုပ်သင်) ကြိုဆို◆ salary နေ့စဉ်လစာ ၁၃၀၀၀ ယန်းမှ ၂၀၀၀၀ ယန်း☆အတွေ့အကြုံ၊ အရည်အချင်း၊ စွမ်းရည်ကိုစဉ်း စား၍ ဦး စားပေးကုသမှု※စမ်းသပ်ကာလရရှိနိုင်ပါသည်◆လစဉ်လစာ ၂၄၄,13,000 ...
Uraga၊ Yokosuka City၊ Kanagawa စီရင်စု (Obaradai) ★သတ်မှတ်ထားသောနေရာအစည်းအဝေးသို့သွားပါ။ / တိုက်ရိုက် / တိုက်ရိုက်ပြန်လာဖြစ်နိုင်
Ishige Formwork Co. , Ltd.အလုပ်များကြည့်ပါ
လက်သမား★နေ့စဉ်လစာ ~ ၁၆၀၀၀ ယန်း★အတွေ့အကြုံရှိသူ ဦး စားပေးကုသမှု★ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ခွင့်★★အပတ်စဉ်ငွေပေးချေမှု (စည်းမျဉ်းများအတွင်း)၊ နှစ်ပတ်တစ်ပတ်စနေနေ့အားလပ်ရက်များ၊ ခဏတာတွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းများစသဖြင့်။လူသားမျိုးနွယ်အပေါ် - co နွေးထွေးသောအလုပ်ခွင် you inex သင့်မှာအတွေ့အကြုံနည်းသော်လည်းစိတ်ငြိမ်သက်မှု << လှုံ့ဆော်မှု / စိတ်အားထက်သန်မှု >> ကျွန်ုပ်အားအစကတည်းကအရာရာကိုသင်ပေးပါမည်♪
industries ★ other အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများမှအလုပ်ပြောင်းရန်စဉ်းစားနေသောသူများ☆★ I ကျွန်ုပ်နားမလည်သောအရာများ၊အတွေ့အကြုံမရှိသူများပင်ကြင်နာစွာနှင့်ယဉ်ကျေးစွာဖြင့်လိုက်နာကျင့်သုံးကြသည်။ ထို့ကြောင့်လျှောက်ထားရန်လွတ်လပ်စွာ ကျေးဇူးပြု၍ ♪ဤသည်မှာတစ်သက်တာအတွက်အလုပ်တစ်ခုနှင့်အရည်အချင်းပြည့်မီရန်သင့်အခွင့်အရေးဖြစ်သည်။ ☆★☆အတွေ့အကြုံရှိပြီးဗဟုသုတရှိသောစစ်ပြန်☆★☆အတွေ့အကြုံရှိသောလူများသည်သင်၏အတွေ့အကြုံကိုချက်ချင်းပြသနိုင်သောပတ်ဝန်းကျင်ရှိသည်။သင့်ရဲ့စွမ်းရည်ကိုအပြည့်အဝအသုံးချပါ။သင်၏ကုမ္ပဏီ၏လှုံ့ဆော်မှုနှင့် GUTS များကိုစနစ်တကျအကဲဖြတ်သည့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျေးဇူးပြု၍ ပြvariousနာအမျိုးမျိုးနှင့်အကြံဥာဏ်များကိုပြောပြရန်တွန့်ဆုတ်မနေပါနဲ့!
လက်သမား / ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအလုပ်
[ကုမ္ပဏီ] ■အတွေ့အကြုံရှိသောလက်သမားများအတွက်အထူး ဦး စားပေးကုသမှု detailed အသေးစိတ်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းအတွက်လစာပိုမိုကောင်းမွန်သောကုသမှု☆အတွေ့အကြုံမရှိသူ (အလုပ်သင်) များကိုနေ့စဉ်လစာ ၈၀၀၀ မှ ၁၆,၀၀၀ ယန်း * လက်ခံရသည်။ ရုံးတင်စစ်ဆေးသည့်ကာလ period အပတ်စဉ် ...
Yokosuka City, Kanagawa စီရင်စု
အဓိကအားဖြင့်ကန်နာဂါစီရင်စုနှင့်ဆင်ခြေဖုံးများတွင်★ front ရုံးရှေ့၌အစည်းအဝေး၌အုပ်စုလိုက်စီးနင်းခြင်း※တိုက်ရိုက်နှင့်တိုက်ရိုက်ပြန်လာနိုင်သည်
[ဆောက်လုပ်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှု / လုပ်ငန်းခွင်ကြီးကြပ်ရေးမှအရေးပေါ်လူသစ်စုဆောင်းခြင်း] ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးတိုးချဲ့လာသည်နှင့်အမျှအနာဂတ်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိသောအင်အားသစ်များကိုကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းနေကြသည်။Oshiro ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသည် (၆၂) နှစ်ကြာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီးတစ်ချိန်တည်းတွင်တည်ငြိမ်မှုနှင့် ၀ င်ငွေမြင့်မားစွာရရှိနိုင်သည်။
▼ကျွန်ုပ်သည်အမြဲတမ်းအိမ်ရာဆောက်လုပ်ခြင်း၊ ငလျင်ဒဏ်ခံနိုင်မှုနှင့်အတားအဆီးကင်းသောပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းစသည့်များစွာသောအလုပ်များနှင့်ကျောင်းများနှင့်ပန်းခြံများရှိအများဆိုင်အလုပ်များနှင့်အမြဲအလုပ်များလျက်ရှိသည်။သင်အတတ်နိုင်ဆုံးလုပ်ဆောင်ပါ၊ သင်အကောင်းဆုံးလုပ်လေလေလူများစွာပျော်ရွှင်လေဖြစ်မည်။ဤသို့သောအလုပ်ကိုနှစ်သက်သောသူငယ်ချင်းများကိုကျွန်ုပ်တို့စောင့်ဆိုင်းနေပါသည်။
▼ဆောက်လုပ်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှု / လုပ်ငန်းခွင်ကြီးကြပ်မှု
Construction ဆောက်လုပ်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှု / လုပ်ငန်းခွင်ကြီးကြပ်မှုလစဉ်ယန်း XNUMX-XNUMX ယန်း * အတွေ့အကြုံနှင့်စွမ်းရည်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးအကဲဖြတ်လိမ့်မည်။ မင်းရဲ့ကြိုးပမ်းမှုအရမင်းကိုလစာတိုးပေးမှာပါ
▼တိုကျိုရှိ Itabashi-ku၊ Tokyo နှင့် Saitama, Chiba, Kanagawa နှင့် Ibaraki စီရင်စုများကဲ့သို့သော Kanto inရိယာများရှိ site များအားလုံး။
Ken Miya ကုမ္ပဏီလီမိတက်
[ပန်းချီ ၀ န်ထမ်းခေါ်ယူမှု] ဘာလို့ဘာကြောင့်ဘာကြောင့်စစ်မှန်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုမသင်ယူရတာလဲ။ အရည်အချင်းပြည့်မီသောပထမတန်းစားဆေးသုတ်ပညာရှင်များသည်သင့်အားပထမတန်းစားနည်းစနစ်များကိုသေသေချာချာသင်ပေးလိမ့်မည်။၎င်းသည်အတွေ့အကြုံရှိသောအတွေ့အကြုံရှိသူများသာမကအတွေ့အကြုံမရှိသူများနှင့်စိတ်ငြိမ်သက်မှုဖြင့်အလုပ်လုပ်နိုင်သောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။
★အလုပ်လုပ်ကိုင်နေစဉ်အတွင်းအမျိုးသားအရည်အချင်းများကိုသင်လေ့လာနိုင်သည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပထမတန်းစားပန်းချီပညာရှင်၏အရည်အချင်းကိုရရှိရန်ရည်မှန်းထားသူများအားကျွန်ုပ်တို့ထောက်ခံသည်။ပန်းချီပညာရှင်တစ် ဦး ၏အရည်အချင်းသည်ခက်ခဲပြီးနှစ်အနည်းငယ်အတွေ့အကြုံလိုအပ်သောကြောင့်၎င်းကိုချက်ချင်းရယူရန်မဖြစ်နိုင်ပါ၊ သို့သော်ထိုအရည်အချင်းအတွက်လိုအပ်သောဗဟုသုတနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံအဆင့်အရည်အချင်းပြည့်မှီသူများဖြစ်သည်။ မင်းကိုသင်ပေးမယ်ပထမတန်းစားပန်းချီပညာရှင်တစ် ဦး ၏အရည်အချင်းကိုရယူရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ယခုမှတက်လှမ်းကြပါစို့။
★အတွေ့အကြုံရှိသူ / နေ့စဉ်လုပ်ခ ၁၂၀၀၀ ယန်း ~ ၁၈၀၀၀ ယန်း★အစပြုသူ / နေ့စဉ်လုပ်ခ ၁၀,၀၀၀ ယန်းစတင်※အတွေ့အကြုံနှင့်စွမ်းရည်ကိုအများဆုံးအထိအကဲဖြတ်လိမ့်မည်။ မင်းရဲ့ကြိုးပမ်းမှုအရမင်းလစာကိုဘယ်အချိန်မဆိုမြှင့်မယ်။
★တိုကျိုတစ်လျှောက်လုံးတွင် Katsushika-ku၊ Tokyo နှင့် Chiba၊ Saitama, Kanagawa ရှိ site တစ်ခုစီကိုဗဟိုပြုသည်။ * စက်ဘီးနှင့်ဆိုင်ကယ်စီးခြင်းသည်အဆင်ပြေပါသည်။
Ken Miya ကုမ္ပဏီလီမိတက်အလုပ်များကြည့်ပါ
D Miles Co. , Ltd.
[သစ်သားအဆောက်အအုံများအတွက်လုပ်သား ၀ န်ထမ်းများကိုဖျက်သိမ်းခြင်း။ ] ရှိပြီးသား ၀ န်ဆောင်မှုများကို ၀ သို့ထားပါ။ “ XNUMX” ဟုသတ်မှတ်ပါကအောင်မြင်မှုအတွက်အဓိပ္ပာယ်မရှိပါ။ကြီးပွားအောင်လုပ်ကြကုန်အံ့။ !! !!
before သင်တစ်ခါမျှမမြင်ဖူးသောရှုခင်းကိုကြည့်လိုပါကဤနေရာတွင်သာရှိသည်။အရာရာတိုင်းကိုဟောင်းနွမ်းသောအရာများအား“ သင်၏လက်ဖြင့်”“ XNUMX” ဟုသတ်မှတ်သောအခါ၎င်းသည်အလေ့အထဖြစ်လိမ့်မည်။စက်များနှင့်လူများ၏စွမ်းအားဖြင့်အဆောက်အအုံကိုဖျက်သိမ်းရုံသာမက ၀.၀. မြေဖြစ်လာပြီးနောက်တိုင်းပြည်၏သမိုင်းကြောင်းကိုလည်းဖျက်သိမ်းရုံသာမကတစ်ခါတစ်ရံတွင်စိတ်လှုပ်ရှားစရာသာမကနူးညံ့သိမ်မွေ့မှုကိုလည်းလိုအပ်သည်။ လူမှုရေးအလှူငွေဒီဂရီ။
▶နေ့စဉ်လစာအတွေ့အကြုံမရှိသောသူ / ယန်း ၁၂၀၀၀ ~ အတွေ့အကြုံရှိသူ (၅ နှစ်မပြည့်သောအတွေ့အကြုံ) / ၁၃၀၀၀ ယန်း ~ အတွေ့အကြုံရှိသူ (၁၀ နှစ်နှင့်အထက်အတွေ့အကြုံ) / ၁၄၀၀၀ ယန်း ~ * လေ့ကျင့်မှုကာလရှိပါသည်။ * အတွေ့အကြုံနှင့် ...
▶တိုကျိုတစ်လျှောက်လုံးတွင် Ota-ku၊ Tokyo နှင့် Kananto အနီးရှိ Kanagawa, Chiba နှင့် Saitama ကဲ့သို့သောနေရာများကိုဗဟိုပြုပါ။ * ရုံးမှာတွေ့ဆုံပြီး site ကိုသွားမယ်။
D Miles Co. , Ltd.အလုပ်များကြည့်ပါ
[လက်သမားပုံစံ] အတွေ့အကြုံမရှိသူများကိုကြိုဆိုသည်။များပြားလှသောအလုပ်များကြောင့်ချက်ချင်းဝင်ငွေမြင့်မားသည်။ ★နေ့စဉ်ယန်း ၂၀၀၀၀ (သို့) ထိုထက်ပိုသောလစာသည်★ဖြစ်နိုင်ပါသည်
မြင့်မားသောလစာပေးသော "ပုံသဏ္carာန်လက်သမား" ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွင်!ဘာကြောင့်အကျိုးဖြစ်ထွန်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုအသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းအဖြစ်လုပ်မ don't don't ☆☆
အတွေ့အကြုံရှိသူတစ် ဦး ၏နေ့စဉ်လစာ ၁၆၀၀၀ ယန်းမှ ၂၀,၀၀၀ ယန်းသို့မဟုတ်ထိုထက်မကအလုပ်သင်နေ့စဉ်လစာယန်း ၁၀၀၀၀ - * သင်တန်းကာလသည် ၂-၃ လဖြစ်သည် (ကာလကိုတိုနိုင်သည်)
Kamagaya City, Chiba စီရင်စု
[ရုံး] ၃-၂-၃၀ Kamagaya၊ Kamagaya City, Chiba Prefecture Amaranth3Funabashi စီးတီး၊ Chiba စီရင်စု၏ဗဟိုကိုဗဟိုပြုသည့်စီရင်စုတစ်ခုလုံးသည်တိုကျိုရှိရပ်ကွက် ၂၃ ခု၊ အရှေ့ပိုင်း Saitama စီရင်စု၊ Ibaraki စီရင်စု
Koei Sumiso Co. , Ltd.
[ပန်းချီ၊ လက်သမား / ကျွမ်းကျင်သောလုပ်သား] အလုပ်များသောအချိန်ကြောင့်အရေးပေါ်အလုပ်ခန့်အပ်ခြင်း။များစွာသောဆိုဒ်များတွင်အလုပ်မရှိပါ။ဟုတ်ပါတယ်, အလုပ်ချက်ချင်း OK ကို!shigarami မပါဘဲအဆင်ပြေအလုပ်ခွင်၌ပိုက်ဆံရှာ!သင့်အားလစာမြင့်စွာဖြင့်သင့်အားအထူးကုသမှုပေးမည်။
လျှောက်လွှာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုန်ကျစရိတ်အင်တာဗျူးသည့်အချိန်တွင်လည်းပေးဆောင်ကြသည်!ပြန်လည်းကြိုဆိုပါတယ်။ပထမ ဦး ဆုံးလျှောက်ထားရန်အခမဲ့ခံစားရပါ။ * အရောင်း ၀ န်ထမ်းများကိုတစ်ချိန်တည်းတွင်စုဆောင်းလျက်ရှိသည် (အဆောင်ရှိ / ချက်ချင်းပြောင်းရွှေ့ရရှိနိုင်)
・ ပန်းချီဆရာ ・ လက်သမား ・ ကျွမ်းကျင်သူလုပ်သား
■နေ့စဉ်လစာ [လက်သမား] ယန်း ၁၈၀၀၀ ~ [ပန်းချီလက်သမား] ယန်း ၁၅၀၀၀ ~ [ကျွမ်းကျင်သောလုပ်သား] ၁၂ ယန်း ၁၂၀၀၀ ~ * အတွေ့အကြုံနှင့်စွမ်းရည်ပေါ် မူတည်၍ ။ * အရောင်း ၀ န်ထမ်းများအားတစ်ပြိုင်နက်စုဆောင်းခြင်း (အသေးစိတ် ...
Koei Sumiso Co. , Ltd.အလုပ်များကြည့်ပါ
Nori Corporation Co. , Ltd.
[ကွင်းဆင်းလုပ်သားများ] အတွေ့အကြုံရှိသူ၊ အတွေ့အကြုံနည်းသူများသည်အရေးမကြီးပါ။ [ပုဂ္ဂလိကဆောင်အပြီး XNUMX အစားအစာနှင့်အတူ]
the အဆောင်သို့ပြောင်းရွှေ့သူများသည်ခေါင်းလျှော်ရည်၊ ခန္ဓာကိုယ်ဆပ်ပြာ၊ သွားတိုက်တံနှင့်ခေါင်းအုံးအသစ်ကဲ့သို့သောနေ့စဉ်လိုအပ်သည့်ပစ္စည်းများ (^^ ♪ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်း BBQ ကဲ့သို့သောအခြားအဖြစ်အပျက်များနှင့်မွေးနေ့များအတွက်နှစ်ကုန်တွင်ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။ ရုံးခန်းထဲကလက်ဆောင်လေးတစ်ခုကိုလည်းပြင်ဆင်နေပါတယ်။
နေ့စဉ်လစာ¥ 10.000 ~ * အတွေ့အကြုံရှိသူများနှင့်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရသူများကို ဦး စားပေးကုသမှုပေးသည်။
Chiba စီးတီး, Chiba စီရင်စု
တိုကျို၊ ကန်နာဂါ၊ ဆိုင်းတာမာစသည့်နေရာများ၊ Chiba စီရင်စုကိုဗဟိုပြုသည်
Nori Corporation Co. , Ltd.အလုပ်များကြည့်ပါ
[ပြင်ပဆောက်လုပ်ရေး] အလုပ်များသောကြောင့်အရေးပေါ်အလုပ်ခန့်အပ်ခြင်း။ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ချက်အိုကေ! [အတွေ့အကြုံမရှိသူများကြိုဆိုသည်]
▼ပြင်ပဆောက်လုပ်ရေး ၀ န်ထမ်းများ
▼နေ့စဉ်လစာ / ယန်း ၁၀၀၀၀ မှ ၂၀၀၀၀ ယန်း * အတွေ့အကြုံနှင့်စွမ်းရည်များကိုစဉ်းစားသုံးသပ်ပါမည်။ မင်းရဲ့ကြိုးပမ်းမှုနဲ့အညီငါတို့လစာကိုဘယ်အချိန်မဆိုမြှင့်မယ်။
▼ Machida City, Tokyo, တိုကျိုတစ်လျှောက်လုံးနှင့် Kanagawa ကဲ့သို့သောဆင်ခြေဖုံးရှိ site တစ်ခုစီ။
Yoshikawa tile ကို
[tile လက်မှုပညာရှင်များကိုခန့်အပ်ခြင်း] အသက်သည်အရေးမကြီးပါ။အတွေ့အကြုံမလိုအပ်ပါ။လူငယ်များ၊ စစ်ပြန်များ၊ အစပြုသူများနှင့်လက်မှုပညာရှင်များအားလုံးကိုကြိုဆိုပါတယ်။ [နေ့စဉ်ငွေပေးချေမှုတိုင်ပင်ဆွေးနွေး]
■သင်သည်ထိုင်။ ကြာမြင့်စွာထိုင်။ နေနိုင်သောပတ်ဝန်းကျင်တွင်၎င်းသည်အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောအလုပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။to အလုပ်လုပ်ရန်လွယ်ကူသောကြောင့်သင်၏အကောင်းဆုံးကိုလုပ်နိုင်သည်။ your သင်အတတ်နိုင်ဆုံးလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းကြောင့်ကြီးပွားနိုင်သည်။ grow သင် ပို၍ ကြီးထွားနိုင်သည်သို့မဟုတ်ဝင်ငွေလည်းပိုရနိုင်သည်။ ထိုသို့သောသီလသံသရာ၌သင်နှင့်ကုမ္ပဏီနှင့်အတူကြီးပွားကြပါစို့။
■ကြွေပြားဆောက်လုပ်ရေး ၀ န်ထမ်းများ
■နေ့စဉ်လစာယန်း ၉၀၀၀ မှ ၁၆၀၀၀ ယန်း * အတွေ့အကြုံနှင့်စွမ်းရည်များကိုစဉ်းစားသုံးသပ်ပါမည်။ မင်းရဲ့ကြိုးပမ်းမှုအရမင်းလစာကိုဘယ်အချိန်မဆိုမြှင့်မယ်။
Kusaka City, Saitama စီရင်စု
■ Saitama စီရင်စုတစ်ခုလုံးရှိ Saitama စီရင်စုရှိ Kusaka မြို့နှင့်တိုကျိုနှင့် Chiba စီရင်စုများကဲ့သို့သောဆင်ခြေဖုံးဒေသများရှိနေရာများ။ * ဆိုက်ပေါ် မူတည်၍ ကုမ္ပဏီတစ်ခုထူထောင်နိုင်သည်သို့မဟုတ်ရုံးသို့တိုက်ရိုက်သွားနိုင်သည်။
Yoshikawa tile ကိုအလုပ်များကြည့်ပါ
Kyosei Co. , Ltd.
[ဖောင်ဒေးရှင်းအလုပ်] ကျွန်ုပ်တို့သည်အမျိုးမျိုးသောအလုပ်များကိုလုပ်ကိုင်ကြသောကြောင့်၎င်းသည်မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ၊ ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးတို့နှင့်သက်ဆိုင်သောမည်သည့်အတွေ့အကြုံကိုမဆိုသင်အသုံးပြုနိုင်သည်။အတွေ့အကြုံမရှိသူများပင်လျှင်ကြီးထွားမှုကိုခံစားရနိုင်သည်။၎င်းသည်အိမ်တွင်းကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်လွတ်လပ်စွာလျှောက်ထားနိုင်သည်။
company ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်အမြဲတမ်းအနှောက်အယှက်မရှိဘဲနေရာအမျိုးမျိုးတွင်အလုပ်အမျိုးမျိုးလုပ်သည်။ထို့ကြောင့်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းနှင့်သက်ဆိုင်သောမည်သည့်အတွေ့အကြုံကိုမဆိုသင်အသုံးပြုနိုင်သောပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုဖြစ်သည်။၀ က်ဘ်ဆိုက်များစွာနှင့်အလုပ်အမျိုးအစားများများစွာရှိသောကြောင့်သင်သည်အတွေ့အကြုံမရှိသူများမှစတင်ခဲ့လျှင်ပင်အမျိုးမျိုးသောအရာများကိုလေ့လာပြီးကြီးထွားနိုင်သည်။အချိန်ပိုင်းအလုပ်တစ်ခုကိုစတင်ခြင်းသည်အဆင်ပြေပါသည်။သင်ဤအရာကိုကျင့်သုံးသည်နှင့်တပြိုင်နက် ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး ကိုခန့်ထားခြင်းဖြင့်လစဉ်လစာ + အပိုဆု၏တည်ငြိမ်သောမြင့်မားသောဝင်ငွေကိုရနိုင်သည်။
◆ဖောင်ဒေးရှင်း ၀ န်ထမ်းများ ・ ကျွမ်းကျင်မှုရှိသောအလုပ် ・ မြေပြင်လုပ်ငန်း ・ Tobi အလုပ် ・ ငြမ်းအလုပ် bar ဘားအလုပ်အားဖြည့်ခြင်း terior အပြင်ဘက်အလုပ် ・ ပုံသဏ္workာန်လက်သမား ・ ပြန်လည်ပြုပြင်သည့်လက်သမား※ထို့အပြင်နေရာများစွာတွင်အရာများစွာရှိသည်။
◆နေ့စဉ်လုပ်အားခအတွေ့အကြုံမရှိခြင်း / ယန်း ၉၀၀၀ စတင်အတွေ့အကြုံရှိသူ / ညှိနှိုင်းနိုင်သည် * အတွေ့အကြုံနှင့်စွမ်းရည်ကိုဂရုတစိုက်စဉ်းစားပြီးအကဲဖြတ်လိမ့်မည်။ * သင်၏ကြိုးစားမှုများအရမည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုလစာကိုတိုးမြှင့်ပေးလိမ့်မည်။
Warabi City, Saitama စီရင်စု
War Warabi စီးတီး၊ Saitama စီရင်စုတွင်အခြေခံသည်၊ Saitama စီရင်စုရှိတိုကျိုတစ်လျှောက်လုံးရှိနေရာများနှင့် Kanagawa နှင့် Chiba စီရင်စုများကဲ့သို့သောဆင်ခြေဖုံးများ။ * တိုက်ရိုက်ပြန်လည်ရောက်ရှိနိုင်ပါသည်
Kyosei Co. , Ltd.အလုပ်များကြည့်ပါ
Apfer Co. , Ltd.
လုပ်ငန်းတိုးချဲ့ခြင်းနှင့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်အရေအတွက်တိုးပွားခြင်းတို့ကြောင့် ၀ န်ထမ်းများအရေးပေါ်ဝန်ထမ်းခေါ်ယူခြင်း။လှုံ့ဆော်လျှင်မြင့်မားသောဝင်ငွေ!အတွေ့အကြုံမရှိသူများကိုကြိုဆိုသည်။
အစပြုသူများကိုလည်းကြိုဆိုပါတယ်။အကြီးအကဲများသည်သင့်အားအစကတည်းကဂရုတစိုက်လမ်းညွှန်လိမ့်မည်။ကျေးဇူးပြု၍ သင့်ကိုသင်နီးကပ်စွာလိုက်နာမည်ဖြစ်ကြောင်းသေချာပါစေ။ အတွေ့အကြုံရှိသူများကို ဦး စားပေးကုသမှုများပေးသည်။ပညာရေးနောက်ခံသည်အရေးမကြီးပါ။အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်ရှိသည့်နိုင်ငံခြားသားများကိုလည်းကြိုဆိုပါသည်။အခါအားလျော်စွာလစာတိုးလာပြီးသင်၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုများကိုကောင်းစွာအကဲဖြတ်နိုင်သည်။
အတွေ့အကြုံရှိသူ ဦး စားပေးကုသမှု 15,000 ယန်း ~ ...
Kawaguchi City, Saitama စီရင်စု
Apfer Co. , Ltd.အလုပ်များကြည့်ပါ
Satake Gumi Co. , Ltd.
[မြေကြီးလုပ်ငန်း၊ ခင်းခြင်း၊ စုဆောင်းခြင်း! ] နှစ်ပေါင်း ၄၀ ကျော်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။နှစ်စဉ်ရောင်းအားယန်းသန်း ၆၅၀ ကျော်ရှိသည်။ထို့အပြင်ကုမ္ပဏီပိုင်မြေသည် tsubo ၄၀၀ ကျော်ရှိသည်။ယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်သက်သေပြနိုင်သော Satake-gumi သည်လုံခြုံစိတ်ချရသော၊ တည်ငြိမ်သောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။
အလုပ်အမြဲချောမွေ့ကျွန်ုပ်တို့သည်အရည်အချင်းပြည့်မှီမှုရရှိမှုကိုအပြည့်အ ၀ ထောက်ခံပြီးကုမ္ပဏီသည်သင်တန်းကာလအတွင်းသင်တန်းကုန်ကျစရိတ်များနှင့်နေ့စဉ်လုပ်ခအားလုံးကိုပေးလိမ့်မည်။အလုပ်သင်လျှောက်ထားရန်အခမဲ့ခံစားရနိုင်ပါတယ်!ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွင်သင်၏ကျွမ်းကျင်မှုကိုတိုးတက်စေရန်အတွက်အကောင်းဆုံးသောပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်သည်။ * ကြိုဆိုသောလူသစ်→ကားရပ်နားရန်နေရာကိုခင်းထားသည်။ * သီးသန့်အခန်းအဆောင်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ကျေးလက်ဒေသမှလူများသည်ကြိုဆိုပါသည်။
・ မြေကြီး ・ ခင်းခင်း
◆နေ့စဉ်လစာ ၁၁၀၀၀ ယန်းမှ ၁၆၅၀၀ ယန်း * အတွေ့အကြုံနှင့်စွမ်းရည်များကိုစဉ်းစားသုံးသပ်ပါမည်။ * သင်၏စွမ်းရည်ကိုအကဲဖြတ်ပြီးသင်၏လစာကိုတိုးမြှင့်ပါ။
Chofu City, တိုကျို
[ဌာနချုပ်] 2-4-6 Fujimi-cho, Chofu-shi, Tokyo ◆တိုကျို၏◆ရိယာတစ်ခုလုံး၊ တိုကျိုတာမာဒေသတွင် ဗဟိုပြု၍ Saitama, Kanagawa နှင့် Chiba စီရင်စုများရှိနေရာများ။
Satake Gumi Co. , Ltd.အလုပ်များကြည့်ပါ
[ပန်းချီ ၀ န်ထမ်း] အကယ်၍ သင်အလုပ်လုပ်လိုပါကသင့်အားကျွမ်းကျင်မှုများရယူပြီးငွေအမြောက်အများ ၀ ယ်ယူစေချင်ပါသည်။ ထိုကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အချိန်ကြာမြင့်စွာ ဆက်၍ အလုပ်လုပ်နိုင်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကိုဖန်တီးလိုက်သည်။ * အလုပ်ပြောင်းမည်ကိုစိုးရိမ်သောသူများအတွက်ကုမ္ပဏီသို့ (၃) ရက်သာလျှင် ၀ င်နိုင်သည် (အခ၊ ပေးဆောင်ရသည်)!
■ Sugawara Paint Studio ၏အားသာချက်မှာသက်သောင့်သက်သာရှိသောပတ် ၀ န်းကျင်ရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်လူတို့သည်ရှည်လျားသောထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းအချိန်ရှိပြီးအလွယ်တကူအနားယူရန်မစွမ်းနိုင်ဟုလူတို့ထင်မြင်ကြသည်။ဒီကိစ္စမှာကျွန်ုပ်တို့ဟာထူးခြားတဲ့အလုပ်လွယ်ကူမှုအတွက်ဂုဏ်ယူပါတယ်။ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်ဆိုက်သည်မိနစ် ၃၀ အတွင်းမကြာခဏဖြစ်လေ့ရှိသောကြောင့်လှုပ်ရှားမှုကြောင့်ကြာမြင့်စွာကန့်သတ်ချက်အနည်းငယ်ရှိခြင်းကြောင့်၎င်းသည်လွတ်လပ်သောအချိန်ကိုယူရန်ပိုမိုလွယ်ကူပြီးကိုယ်ပိုင်ဘဝကိုလည်းတိုးမြှင့်နိုင်သည်။မိသားစုပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် မူတည်၍ အချို့သူများသည်အားလပ်ရက်များစွာယူရကောင်းလိုအပ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်က“ သာမန်ပန်းချီဆရာ၏အလုပ်ချိန်များအတွင်းကျွန်ုပ်မအလုပ်လုပ်နိုင်ပါ” ဟုပြောပါကကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်ပါ။စိတ်ရင်းမှန်သူတွေကိုတတ်နိုင်သလောက်ထည့်စဉ်းစားချင်ပါတယ်
ဆေးသုတ်ခြင်း ၀ န်ထမ်းများ
■နေ့စဉ်လစာ [အလုပ်သင်] ယန်း ၉၀၀၀ မှ ၁၅၀၀၀ ယန်း [အတွေ့အကြုံရှိသူ] ယန်း ၁၅၀၀၀ မှ ၂၀၀၀၀ ယန်း * အတွေ့အကြုံနှင့်စွမ်းရည်ကိုစဉ်းစားသုံးသပ်ပါမည်။ သင်၏ကြိုးစားမှုပေါ် မူတည်၍ အချိန်မရွေး ...
Sagamihara, Kanagawa စီရင်စု
■တိုကျိုဆင်ခြေဖုံးရှိ Atsugi City နှင့် Machida City, Kanagawa Prefecture, Sagamihara City ကိုဗဟိုပြုသည့်နေရာများ။ * တိုက်ရိုက်ပြန်လာဖြစ်နိုင်ပါတယ်
●လက်သမားအလုပ်သင်အလုပ်ခန့်အပ်ခြင်း။အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများမှအလုပ်ပြောင်းခြင်းကိုလည်းကြိုဆိုပါတယ်။ရှေ့ ဦး စွာ မှစ၍ သင်တို့အားငါသွန်သင်မည်။
အိမ်နှစ်လုံး - လေးလုံးနဲ့သစ်သားအိမ်တွေကိုငါတို့လုပ်နေတယ်။ ★☆★လက်သမားအလုပ်ခန့်အပ်ခြင်း★☆★သင်သည်အစမှ စတင်၍ အလုပ်တစ်ခုကိုအစပြုနိုင်ပြီးအစောပိုင်းကာလတွင်ပြည့်စုံသောအလုပ်တစ်ခုလုပ်နိုင်လိမ့်မည်။သင့်တွင်အလုပ်အသေးစိတ်သို့မဟုတ်မေးခွန်းများရှိပါကကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။ * အခြေခံအားဖြင့်လက်သမားများကိုစာချုပ်အရအလုပ်လုပ်ရန်လည်းတောင်းဆိုသည်။
★လက်သမားအလုပ်သင် - နေ့စဉ်လစာ ၈၀၀၀ မှ ၁၇၀၀၀ ယန်း (ရုံးတင်စစ်ဆေးခြင်းကာလသည် ၂ လခန့်)
Yotsukaido City, Chiba စီရင်စု
148-19-202 Dainichi, Shikaido City, Chiba Prefecture Chika စီရင်စုရှိ site တစ်ခုစီသည် Shikaido City၊ Chiba City, Sakura City, Yachiyo City နှင့်စသည်တို့ဖြစ်သည်။
First Top Co. , Ltd.
[ဖြိုဖျက်ခြင်း ၀ န်ထမ်းများ] တိုကျို၏ဆင်ခြေဖုံးရှိဆိုဒ်များစွာ!အဓိကအထွေထွေကန်ထရိုက်တာများအတွက်အလုပ်များစွာရှိပါသည်၊ သင်တည်ငြိမ်သော ၀ င်ငွေကိုရနိုင်သည်။လေ ၀ င်လေထွက်ကောင်းသည့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်ပါကသင်၏အကောင်းဆုံးစွမ်းအားကိုအကဲဖြတ်လိမ့်မည်။ ♪ [အကြီးစားစက်ယန္တရားများနှင့်ပန်းပဲသမားများကိုလည်းစုဆောင်းသည်]
★တိုကျို၏ဆင်ခြေဖုံးနေရာများစွာတွင်အမြဲတမ်းနေရာများစွာရှိပြီးအဓိကအထွေထွေကန်ထရိုက်တာများအတွက်အလုပ်များစွာရှိသည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည် ၀ င်ရောက်နှောင့်ယှက်ခြင်းမရှိဘဲတည်ငြိမ်သော ၀ င်ငွေကိုရရှိနိုင်သည်။ ★လူမှုဖူလုံရေးအာမခံကိုလည်းရရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်သင်၌တစ်ခုခုရှိကြောင်းစိတ်ချနိုင်ပါသည် (^^) ★သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုန်ကျစရိတ်များကို ပေး၍ သင်သည်ကားဖြင့်သွားနိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့်ခရီးသည်များလွယ်ကူစွာ♪★နေ့စဉ်နှင့်အပတ်စဉ်ငွေပေးချေမှုများကိုစိတ်ငြိမ်သက်မှုဖြင့်သင်တိုင်ပင်နိုင်သည် အသွားအပြန်နိုင်ပါတယ်!
ition ဖြိုဖျက်ခြင်း ၀ န်ထမ်းများ (ကုမ္ပဏီ / က) avy အကြီးစားပစ္စည်းအော်ပရေတာ (ကုမ္ပဏီ) ③ပန်းပဲဆရာ (ကုမ္ပဏီ)
★①ဖြိုဖျက်ခြင်းအလုပ် (ကုမ္ပဏီ) [အတွေ့အကြုံရှိသူ] နေ့စဉ်လစာ ၁၃၀၀၀ ယန်း ~ [အတွေ့အကြုံမရှိခြင်း] နေ့စဉ်လစာ ၁၁၀၀၀ ယန်း ~ ―――――――――― ★①ဖြိုဖျက်ခြင်းအလုပ် (က) / နေ့စဉ်လစာ ၉၀၀၀ ယန်း ~ ―― ။ ..
★တိုကျိုရှိ Edogawa ရပ်ကွက်၊ တိုကျိုနှင့် Kanto အနီးရှိ Chiba စီရင်စုကဲ့သို့သောကွန်ရက်စာမျက်နှာများ။ * နံနက်အစည်းအဝေးကျင်းပရာနေရာ - တိုကျို၊ 1-chome Matsue, Edogawa-ku
First Top Co. , Ltd.အလုပ်များကြည့်ပါ
Joei Engineering Co. , Ltd.
[ပစ္စည်းလုပ်သား] ဒေသခံinရိယာမှာအမြစ်တွယ်လာတာနှစ်ပေါင်း ၃၀ ရှိပြီ။သငျသညျအပေါများအလုပ်အပေါ်အခြေခံပြီးလေအေးပေးစက်ပစ္စည်းကိရိယာများ, လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ပိုက်ပစ္စည်းကိရိယာများအဖြစ်အမျိုးမျိုးသောပစ္စည်းကိရိယာများဆောက်လုပ်ရေးအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြစ်ချင်ပါသလား? ??
expansion ■လျှောက်လွှာချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ခြင်းဖြင့်စီးပွားရေးတိုးချဲ့ခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့တုန့်ပြန်ပါမည်။ □ found တည်ထောင်ပြီးနှစ်ပေါင်း ၃၀! သင်သည်“ တည်ငြိမ်သော” အလုပ်ဖြင့်ခိုင်မာသောအလုပ်ရရှိနိုင်သည်။သင့်တွင်အတွေ့အကြုံနည်းပါးသည်ဖြစ်စေ၊ အလုပ်ပြောင်းရန်စဉ်းစားနေသောအတွေ့အကြုံရှိပါစေလျှောက်ထားပါ။
●ပစ္စည်းကိရိယာလက်သမား (အလုပ်သင်) ●ပစ္စည်းကိရိယာတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ၀ န်ထမ်းများ●ပိုက်ဆောက်လုပ်ရေး ၀ န်ထမ်းများ●အရောင်း ၀ န်ထမ်းများ
[အတွေ့အကြုံရှိသူ] လစဉ်လစာသည်ယန်း ၂၅၀,၀၀၀ မှစတင်သည်☆ဝန်ထမ်းအများစုသည်ယန်း ၄၀၀၀၀၀ ကျော်စာရင်းသွင်းထားသည် [အတွေ့အကြုံမရှိသူ] နေ့စဉ်လစာသည်ယန်း ၁၀၀၀ မှစတင်သည် (ရုံးတင်စစ်ဆေးမှုကာလ ၃ လ * အတိုကောက် ...
Tsukubamirai City, Ibaraki စီရင်စု
ဒေသခံ Tsukuba Mirai [Ibaraki စီရင်စု] ... ဒေသတစ်ခုလုံး [တိုကျို] ... ၂ ရပ်ကွက် [Tochigi စီရင်စု] ... ...ရိယာ [Chiba စီရင်စု] ... စီရင်စု၏မြောက်ပိုင်း [Saitama စီရင်စု] ... အရှေ့ဘက်အစိတ်အပိုင်း ... ဆောက်လုပ်ရေး ...
Joei Engineering Co. , Ltd.အလုပ်များကြည့်ပါ
Improv Co. , Ltd.
[အထွေထွေဖျက်သိမ်းရေးအလုပ်] ◆သက်တောင့်သက်သာရှိသောအလုပ်လုပ်နိုင်သောပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောအဆင်ပြေသောကုသမှုဖြင့်ဘဝကိုမြှင့်တင်ပါ။ဟုတ်ပါတယ်, အတွေ့အကြုံနှင့်အတွေ့အကြုံရှိသူများနှစ် ဦး စလုံးကြိုဆိုကြသည်! ကျွန်ုပ်တို့သည်ဝန်ထမ်းများ၊ အကြီးစားစက်ယန္တရားလုပ်ငန်းများ၊ ဓာတ်ငွေ့လုပ်သားများ၊ ခြစ်များ၊ ငြမ်းများစသည်ဖြင့်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ရှာဖွေနေသည်။ ]
ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်များနှင့်ပျူငှါနွေးထွေးသောကော်ပိုရေးရှင်းယဉ်ကျေးမှုကိုကျွန်ုပ်တို့ဂုဏ်ယူကြသည်။ /// of အလုပ်အမျိုးအစားနှင့်အလုပ်များစွာရှိသည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်ဖြိုဖျက်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုအဓိကအာရုံစိုက်သောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သော်လည်းအကြီးစားစက်ယန္တရားလုပ်ငန်းများ၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်း၊ ခုတ်လှဲခြင်းလုပ်ငန်း၊ ငြမ်းအလုပ်စသည်ဖြင့်ဖြိုဖျက်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောအလုပ်အကိုင်အမျိုးမျိုးရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သည့်အလုပ်ကိုမဆိုရရှိနိုင်သောပတ်ဝန်းကျင်တွင်ရှိနေပါသည်။တစ် ဦး ဖျက်သိမ်းရေးနှင့်အတူသွားချင်သောသူ, အမျိုးမျိုးသောနည်းစနစ်များဆည်းပူးချင်သောသူတို့အား, ယခုအချိန်အထိအတွေ့အကြုံနှင့်အလုပ်စတိုင်နှင့်အညီအလုပ်လုပ်နိုင်မှဆွဲဆောင်မှုပါ!ဟုတ်ပါတယ်, အတွေ့အကြုံကလူလည်းကြိုဆိုကြသည်!လက်မှ စတင်၍ လက်မှုပညာရှင်ဖြစ်လာသော ၀ န်ထမ်းများစွာရှိပါသည်။ ♪◆တောက်ပ။ သက်သောင့်သက်သာရှိသောပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်သည်။ကျနော်တို့ကုမ္ပဏီ၏လေထုတန်ဖိုးထား။၎င်းသည်သက်သောင့်သက်သာရှိသောပတ် ၀ န်းကျင်တစ်ခုဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်သင်သည်အချိန်ကြာမြင့်စွာ ဆက်၍ နေနိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့်သင်ကြီးထွား။ ငွေရရှိနိုင်သည်။ပထမ ဦး စွာနေ့စဉ်ကြိုးစားအားထုတ်သောလုပ်သားများသည်နေ့စဉ်နှင့်အမျှသူတို့၏ကျေးဇူးတင်မှုကိုစကားလုံးများဖြင့်ပြောဆိုပြီးအလုပ်ကိုဆက်လုပ်ကြပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသည်ပြီးပြည့်စုံသည် (^ ^)
(၁) ဖြိုဖျက်ခြင်းအလုပ် / လက် (၂) အကြီးစားစက်ကိရိယာများလည်ပတ်ခြင်း (၃) ဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်း * ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်ချိန်တည်းတွင်ခြစ်ခြင်း / ငြမ်းအလုပ်ကိုလည်းရှာဖွေနေသည်။
◆နေ့စဉ်လစာ work ဖျက်သိမ်းသည့်အလုပ် / လက် - ယန်း ၁၂၀၀၀ မှ ၁၈၀၀၀ ယန်း avy အကြီးစားစက်ကိရိယာ - ယန်း ၁၅၀၀၀ မှ ၂၀၀၀၀ ယန်း③ဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်း (ဖျူး) - ၁၂၀၀၀ ယန်း ~ ...
Saitama, Saitama စီရင်စု
Tok တိုကျိုတလျှောက်နှင့် Saitama စီရင်စုကဲ့သို့သောဆင်ခြေဖုံးနေရာများ။ * Kitatoda ရုံးတွင်စုဆုံပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအတူတကွလှုပ်ရှားသွားကြလိမ့်မည်။ * တိုက်ရိုက်တုံလည်းကောင်းပါတယ်။
Improv Co. , Ltd.အလုပ်များကြည့်ပါ
Genvers သည် "Field", "Job in hand" နှင့် "ဝင်ငွေ" တို့၏အယူအဆပါ ၀ င်သည့်ကွင်းဆက်အခြေပြုအလုပ်သတင်းအချက်အလက် site တစ်ခုဖြစ်သည်။ဆောက်လုပ်ရေး၊ ဆောက်လုပ်ရေး၊ မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်လုံခြုံရေးစသည့်နယ်ပယ်အသီးသီးမှအလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုသင်အလုပ်ရရန်၊ ငွေရှာရန်သို့မဟုတ်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အလုပ်အကိုင်များကိုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုသည်။၎င်းတို့၏အတွေ့အကြုံနှင့်အရည်အချင်းများကို အသုံးပြု၍ အလုပ်အသစ်များကိုပြောင်းလဲလိုသူများ၊ လမ်းကြောင်းအသစ်ကိုလိုချင်သူများ၊ လူလတ်ပိုင်းအရွယ်များနှင့်အသက်ကြီးသူများနှင့်ဤနေရာမှပြန်လည်စတင်လိုသူများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်အပြုသဘောဆောင်သောဘဝရှင်သန်ရန်သင့်အတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဘဝနှင့်ဘဝကိုတင်ပြလိုပါသည်။ကျေးဇူးပြု၍ Genvers တွင်အလုပ်တစ်ခုရှာပါ။
/ရိယာ / စီရင်စုအားဖြင့်ရှာဖွေပါ
© 2019 - လယ်ပြင် Genvers အတွက်အလုပ်အကိုင်များ